शनिबार, साउन ९, २०७८ साझावोली संवाददाता
आहा ! बसन्तको हरियाली, हराभरा शैलुङका डाँडापाखा । प्रकृति र अध्यात्मको दोभान मानिने शैलुङ पुग्दा धर्तिकै स्वर्ग पुगेको अनुभुति हुन्छ । तन र मनमा आनन्द र ऊर्जा भरिन्छ । तामाङ भाषाको शब्द ‘शैलुङ’ को नेपाली अर्थ हुन्छ–सय थुम्का । धानको थुप्रो जस्ता थुम्काहरू छन् यहाँ । कुनै अग्ला त कुनै होचा । जैविक विविधताका हिसाबले हेर्दा वनजंगल, जडीबुटी, जंगली जनाबर र चराचुरुङीको भण्डारै हो शैलुङ ।
छिनमै घाम, छिनमै बादल । कहिले कुहिरो र सिर्सिरे बतास । एकै छिनमा वर्षा । सय वटा थुम्काका लुङ शैलुङ, त्यो पनि मालाका लुङजस्तै लहरलहरमा मिलेका । अनेक बान्कीका थुम्काहरू । जता हे¥यो त्यतै कलात्मक परिदृश्य । हेरेर र घुमेर त, खै को पो अघाउला र यहाँ पुग्नेहरू जस्तो लाग्ने ।
कस्तो भव्य थुम्काथुम्की ! सिपालु कलाकारले सीप लगाएर राखेजस्ता । सुकिला, सफा र स्निग्ध । मसिनामसिना भुइँघाँस र भुइँफूलहरू । मानौं, दुबोजस्तै देखिने एकनासका घाँसे गलैँचाले छोपिएका छन्, थुम्काहरू ।
शैलुङका पोषिला घाँस र जडिबुटी खाने चौरीको दूधको स्वादको त के बयान गर्नु छ र ? दोलखा र रामेछाप दुबै जिल्लाको शिर हो, शैलुङ । पानीढोलोको आधारमा एकातिर पानी बग्ने भाग दोलखा र अर्कोतिर पानी बग्ने जति रामेछाप । दोलखाका शैलुङ र मेलुङ दुई गाउँपालिका पानीढोलोको एकातिर पर्छ भने रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका अर्कोतिर । यी ३ गाउँपालिकालाई अँगालेर आफ्नो बृहत प्राकृतिक, जैविक र सांस्कृतिक पहिचानमा फैलिएको छ शैलुङ ।
सुमसुम्याई राखूँझैँ, त्यही लडीबुडी खेली राखूँझैँ लाग्ने प्रिय थुम्काथुम्की । अनेक थुम्काथुम्की स्पर्श गर्दै शैलुङे डाँडा घुम्दा असीमित आनन्दानुभूति हुन्छ ।
हिन्दू र बौद्धमार्गीहरूको साझा पवित्र भूमिका रूपमा पनि चिनिन्छ शैलुङलाई । जनविश्वसअनुसार बौद्ध परम्पराका प्रथम अवतार साङ्गे म्हार्मोचे, पाँचौं पद्मसम्भव र सातौं गौतम बुद्धले पनि यस क्षेत्रमा तपस्या गरेको उल्लेख गरिन्छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्यले सजिएको यस क्षेत्रमा प्राचीन कालका अनेक ऋषिमुनि र तपस्वीहरूले तपस्या गरेका यहाँका गुफाहरू पनि हेर्न लायक छन्। शैलुङ्गेश्वर महादेवको मन्दिर पनि एउटा भव्य ओडारभित्र नै छ ।
माथिमाथि मसिनामसिना घाँसले मात्र छोपिँदा गलैचा ओछ्याएजस्ता सफा, सुन्दर र हरिया थुम्काहरू । तलतल अनेक बोटबिरुवा र जडीबुटीले घेरिएएका जङगलहरू ।
‘वैशाखदेखि असोजसम्म जता हे¥यो त्यतै हरियाली । असोजदेखि पुससम्म पहेँलपुर भुइँफूल । पुसको अन्तिमदेखि फागुनसम्म हिउँले सेताम्मे । फागुनदेखि वैशाखसम्म चिमाल र लालीगुराँस फुलेर ढकमक्क, मौसम अनुसारको सौन्दर्यले छाड्दैन शैलुङलाई ।
दोलखाको अर्को आकर्षक गन्तव्य, यस्तो बन्दैछ ‘मञ्जुश्री पार्क’ (तस्बिरहरु)
कालिञ्चोक क्षेत्रमा बैशाख महिनामा भारी हिमपात, पर्यटकहरुको घुईंचो
दोलखाका धार्मिक पर्यटकिय गन्तव्यहरु खुला, सुरु हुन थाल्यो चहलपहल
असिमित आनन्दको स्वर्ग ‘देउढुङगा’ (फोटोफिचर)